2020 – Year – Alpha Premium
Undekhi Season 1 Season 1 (free ႀကည့္ခ်င္သူမ်ား app ကေနတိုက္ရုိက္ႀကည့္လို႔ရပါတယ္) ##unicode ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားပြီး လောကကြီးရဲ့လူတန်းစားနှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ငွေရှိအာဏာရှိပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရတဲ့လူတန်းစားနဲ့ ငွေမရှိဆင်းရဲလို့အဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတန်းစားနှစ်ရပ်ကို မီးမောင်းထိုးယှဉ်ပြထားတာဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရူသင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းဖြစ်လာမှာပါ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကြောင့် Imdb 8.2/10တောင်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ တိုင်းရင်းသူအကသမားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ပိုက်ဆံရှိပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တဲ့ Atwalမိသားစုရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာအသတ်ခံလိုက်ရပါတယ် အရက်မူးရူးနေကြတဲ့လူတွေရဲ့ကျည်ဆန်ကြောင့် အပြစ်မရှိတဲ့မိန်းကလေးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အဲဒီပွဲမှာ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ ကင်မရာမန်းကောင်လေးကမြင်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီလူသတ်မှုကနေစတင်ခဲ့တဲ့အရူပ်အထွေးတွေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ လူတွေကိုဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ပြီး ပါးစပ်ပိတ်ဖို့အတွက် Atwalမိသားစုကကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အမှန်တရားဆိုတာဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီအရူပ်အထွေးကြီးဟာ ပိုမိုရူပ်ထွေးခဲ့လာပြီး ရဲတွေကပါအနံ့ရသွားခဲ့ပါတယ် ဘယ်လိုတွေစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဆက်ကောင်းလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာခံစားအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုအေျခခံထားၿပီး ေလာကႀကီးရဲ႕လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ေငြရွိအာဏာရွိၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႔ရတဲ့လူတန္းစားနဲ႔ ေငြမရွိဆင္းရဲလို႔အဖိႏွိပ္ခံရတဲ့လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ကို မီးေမာင္းထိုးယွဥ္ျပထားတာျဖစ္လို႔ လက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္႐ူသင့္တဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲေကာင္းျဖစ္လာမွာပါ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ သည္းထိတ္ရင္ဖို ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြေၾကာင့္ Imdb 8.2/10ေတာင္ရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသူအကသမားမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ပိုက္ဆံရွိၿပီးလုပ္ခ်င္ရာလုပ္တတ္တဲ့ Atwalမိသားစုရဲ႕မဂၤလာပြဲမွာအသတ္ခံလိုက္ရပါတယ္ အရက္မူး႐ူးေနၾကတဲ့လူေတြရဲ႕က်ည္ဆန္ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိတဲ့မိန္းကေလးေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ကို အဲဒီပြဲမွာ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေပးေနတဲ့ ကင္မရာမန္းေကာင္ေလးကျမင္သြားခဲ့ပါတယ္ ဒီလူသတ္မႈကေနစတင္ခဲ့တဲ့အ႐ူပ္အေထြးေတြကိုထိန္းႏိုင္ဖို႔ လူေတြကိုဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ၿပီး ပါးစပ္ပိတ္ဖို႔အတြက္ Atwalမိသားစုကႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရားဆိုတာဖုံးကြယ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့အတိုင္း ဒီအ႐ူပ္အေထြးႀကီးဟာ ပိုမို႐ူပ္ေထြးခဲ့လာၿပီး ရဲေတြကပါအနံ႔ရသြားခဲ့ပါတယ္ ဘယ္လိုေတြစိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ဆက္ေကာင္းလာမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမွာခံစားအားေပးၾကပါဦးေနာ္ ===================================================================================================================== Season2(App member only) ##unicode 'Undekhi' ဇာတ်လမ်းတွဲ season-2 ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမကားမှာဆိုရင်ငွေရှိအာဏာရှိပြီး ထင်ရာစိုင်းတတ်တဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဘုရင်အက်ဝယ်မိသားစုရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာ အပြစ်မရှိတဲ့ကချေသည်ကောင်မလေးတစ်ယောက်အသတ်ခံရတာကနေစပြီး အရှုပ်အထွေးတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် ဒီကိစ္စရဲ့အမှန်တရားကိုချပြနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရင်းသေသွားကြတဲ့အပြစ်မဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ ဒီတစ်ခေါက် season-2 မှာလည်းအက်ဝယ်မိသားစုရဲ့သားအရင်းသဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ရင်ကူအက်ဝယ်ဟာဆိုရင် သူ့အဖေရဲ့ လူသတ်မှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်သက်သေတွေ ...
Ragnarok ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Netflix ရဲ့ Third Norwegian Language TV series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ragnarok ဆိုတဲ့ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Marvel ဖန်တွေအတွက်တော့ Ragnarok ဆိုတဲ့စကားလုံးကစိမ်းမယ်မထင်ပါဘူး နော့စ်ဒဏ္ဍာရီအရဆိုရင်ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က ကမ္ဘာပျက်ကိန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် နတ်ဘုရားတွေနဲ့ နတ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်သက်ရှိသတ္တဝါတွေသေဆုံးပြီး ကမ္ဘာကြီးအစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ပျက်စီးသွားမယ့်အချိန်ကိုပြောတာပါ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကနတ်ဘုရားကတော့ Thor ဖြစ်ပါတယ် မက်နာဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာနတ်ဘုရား Thor ဝင်စားတာဖြစ်ပြီးတော့ နတ်ဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ချင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်စွမ်းအင်အပြည့်အဝမရသေးတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့တူကြီးကိုလည်း မရသေးပါဘူး မက်နာတစ်ယောက်စွမ်းအားကြီးလာမှာကိုကြောက်တဲ့နတ်ဆိုးတွေက အားနည်းနေချိန်မှာလုပ်ကြံဖို့cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ကြိုးစားကြပါတော့တယ် မက်နာတစ်ယောက် သူ့ကိုလုပ်ကြံချင်တဲ့နတ်ဆိုးတွေကြားထဲကနေစွမ်းအင်တွေ လက်နက်တွေရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Netflix ရဲ႕ Third Norwegian Language TV series တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ragnarok ဆိုတဲ့ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Marvel ဖန္ေတြအတြက္ေတာ့ Ragnarok ဆိုတဲ့စကားလုံးကစိမ္းမယ္မထင္ပါဘူး ေနာ့စ္ဒ႑ာရီအရဆိုရင္ဒီစကားလုံးရဲ႕အဓိပၸာယ္က ကမာၻပ်က္ကိန္းလို႔အဓိပၸာယ္ရပါတယ္ နတ္ဘုရားေတြနဲ႔ နတ္ဆိုးေတြရဲ႕တိုက္ပြဲေၾကာင့္သက္ရွိသတၱဝါေတြေသဆုံးၿပီး ကမာၻႀကီးအစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ပ်က္စီးသြားမယ့္အခ်ိန္ကိုေျပာတာပါ ဒီဇာတ္ကားရဲ႕အဓိကနတ္ဘုရားကေတာ့ Thor ျဖစ္ပါတယ္ မက္နာဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာနတ္ဘုရား Thor ဝင္စားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ နတ္ဆိုးေတြရဲ႕အႏၲရာယ္ကေန ကမာၻႀကီးကို ကယ္တင္ခ်င္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္စြမ္းအင္အျပည့္အဝမရေသးတဲ့အျပင္ သူ႔ရဲ႕လက္နက္ျဖစ္တဲ့တူႀကီးကိုလည္း မရေသးပါဘူး မက္နာတစ္ေယာက္စြမ္းအားႀကီးလာမွာကိုေၾကာက္တဲ့နတ္ဆိုးေတြက အားနည္းေနခ်ိန္မွာလုပ္ႀကံဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါေတာ့တယ္ မက္နာတစ္ေယာက္ သူ႔ကိုလုပ္ႀကံခ်င္တဲ့နတ္ဆိုးေတြၾကားထဲကေနစြမ္းအင္ေတြ လက္နက္ေတြရေအာင္ဘယ္လိုႀကိဳးစားသြားမလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – ...
TMDb: 8/10 468 votes
Queen Sono ##unicode ကွင်းန်ဆိုနိုဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက အစိုးရထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ SOG က လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ စပိုင်တစ်ယောက်... သူ့မိခင်က သူငယ်စဉ်ကတည်းက အသတ်ခံရပြီး ဖခင်ကလည်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်။ ဆိုနိုဟာ အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မှောင်ခိုလက်နက်ဂိုဏ်းတသ်ခုအကြောင်း လျှို့ဝှက်စုံစမ်းရာကနေ သူ့အမေကိုသတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်တရားခံအကြောင်း တစ်စွန်းတစ်စသိလိုက်ရတယ်။ နောက်တော့ သူ့အမေအသတ်ခံရတာကလည်း ထင်သလောက်မရိုးရှင်းမှန်းတဖြည်းဖြည်းသိလာတဲ့အခါ ဆိုနိုဟာအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်း တစ်ဖက်ကနေလည်း သူ့အမေအသတ်ခံရတဲ့အမှုကိုပြန်စုံစမ်းပါတော့တယ်။ ဆိုနိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ပါဦး ##zawgyi ကြင္းန္ဆိုႏိုဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက အစိုးရေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ SOG က ေလ့က်င့္သားျပည့္ဝၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ စပိုင္တစ္ေယာက္... သူ႔မိခင္က သူငယ္စဥ္ကတည္းက အသတ္ခံရၿပီး ဖခင္ကလည္းေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တယ္။ ဆိုႏိုဟာ အဖြားျဖစ္သူနဲ႔အတူေနထိုင္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသူျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေမွာင္ခိုလက္နက္ဂိုဏ္းတသ္ခုအေၾကာင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္းရာကေန သူ႔အေမကိုသတ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္တရားခံအေၾကာင္း တစ္စြန္းတစ္စသိလိုက္ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔အေမအသတ္ခံရတာကလည္း ထင္သေလာက္မ႐ိုးရွင္းမွန္းတျဖည္းျဖည္းသိလာတဲ့အခါ ဆိုႏိုဟာအဖြဲ႕ရဲ႕တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရင္း တစ္ဖက္ကေနလည္း သူ႔အေမအသတ္ခံရတဲ့အမႈကိုျပန္စုံစမ္းပါေတာ့တယ္။ ဆိုႏိုတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္ရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈခံစားၾကည့္ပါဦး review – Yue Liang File Size – 600MB (per Episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action & ...
The Uncanny Counter The Uncanny Counter(2020) အညွှန်း ********************************** အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၆ ထိ)စ/ဆုံး ငယ်ဘ၀တုန်းက ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် ဘယ်ဘက်ခြေထောက် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့ရပြီး ထူးခြားတဲ့ခွန်အားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ So Moon လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်က ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် အတိတ်မေ့နေခဲ့သူ ရဲအရာရှိဟောင်း Ga Mon Tak အသားချင်းထိလိုက်တာနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ဖတ်နိုင်ပြီး အဝေးကနေလာနေတဲ့ ရန်သူကိုတောင် အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မိန်းကလေး Do Ha Na စားဖိုမှူး မိန်းကလေး Chu Mae Ok နဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ Choi Jang Mool တို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ “Counter” ဒီလိုအများနဲ့မတူတဲ့ ခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးမှာ သူမတူတဲ့စွမ်းအားပိုင်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်သမားငါးယောက်စုဝေးနေကြတယ်။ ဒီလိုစွမ်းအားတွေကို အသုံးချပြီး မကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ လူဆိုးတွေကို လိုက်ဖမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းအားတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချပြီး လူဆိုးတွေကိုဖမ်းကြမလဲ သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကရော ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ
TMDb: 8.5/10 12 votes
Delayed Justice park tae yaung ဆိုတာရှေ့နေတစ်ယောက်….သူက အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကနေ ဥပဒေစာမေးပွဲဖြေလာတဲ့သူဆိုတော့ တခြားဥပဒေကျောင်းဆင်း ရှေ့နေတွေလို အထင်ကြီးမခံရလို့ လိုက်ရတဲ့အမှုတွေကနည်းမှနည်း… အရည်အချင်းရှိသော်ငြားလည်း ထုတ်ဖော်ခွင့်မရသလိုဖြစ်နေတယ်…တစ်နေ့တော့ အိမ်ရာမဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသတ်ခံရတာကို လူမှားစွတ်စွဲကြတဲ့အတွက် park tae yaung ကပိုက်ဆံမရလည်း အမှုတစ်ခုအတွက် သူကြိုးစားပြီး တရားခံဟာ လူမှားစွတ်စွဲကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်….ဒီလိုနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားများကြားမှာ ချက်ခြင်း နာမည်ကြီးသွားတယ်…. Park sam soo ဆိုတဲ့ သူက သတင်းထောက်တစ်ယောက်… အိမ်ရာမဲ့အမျိုးသမီးအသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာ ဒီသတင်းထောက်ဟာသူ့အရည်အချင်းကိုထုတ်ဖော်ဖို့ တရားခံအစစ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်… ကြည့်ရတာ တခြားအကြောင်းအရာများစွာ ဒီလူသေမှုနောက်ကွယ်မှာရှိသေးတဲ့ပုံပဲ.. ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး… နာမည်ကြီးဝါရင့်မင်းသားတွေရဲ့ အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ မို့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး…
Awaken မင်းသား Nam Goong Min ဟာ Hot Stove League (၂၀၁၉) နဲ့Doctor Prisoner(၂၀၁၉)တို့မှာ Ro ခန်းမပြောနဲ့ မင်းသမီးကို ချစ်တဲ့ဟန်အမူအရာလုံးဝမပါဘဲ ပွဲပတ်ကြမ်းနေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကိုရီးယားစီးရီး(၂)ခုမှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသားအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာပါ….ဂျစ်ကန်ကန် မထေမဲ့မြင်အပြုံးနဲ့ တစ်ဘက်သားကို ထိုးနှက်ဖို့ စကားလုံးလှလှတွေသုံးရင်း ထက်မြက်လှတဲ့ သူ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ ရန်သူကို အနိုင်တိုက်တတ်တဲ့ ဒီဟန်အမူအရာတွေကြောင့် အဆင်ငမ်းပါ့မယ်ဆိုတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေတောင် ကြွေခဲ့ပါတယ်….. ဒီစီးရီးထဲမှာလည်း နှုတ်ခမ်းမွေးစစ ပေစုတ်စုတ်နဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ စုံထောက်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်…. အပိုင်း(၁)မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်က အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေတဲ့ မှုခင်းကြီးတစ်ခုကိုပြထားပြီးနောက် ဓားပြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ ကို Nam Goong Min တို့ရဲစုံထောက်တွေလိုက်ဖမ်းတာနဲ့စထားပါတယ်…. ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ စီးရီး(၂)မှာတင် လုံးဝသဘောကျခဲ့တာမို့ ဒီစီးရီးမှာလည်း လန်းဖို့များပါတယ်…သူနဲ့အလိုက်ဆုံး စရိုက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ တော်တော်လည်း အထှာကျပါတယ်..ပြီးတော့ ဘက်ဂျက်အများကြီးသုံးထားပုံရပါတယ်.. ရိုက်ထားတာတွေလည်း တော်တော်မိုက်ပါတယ်. စုံထောက် ၊အက်ရှင်၊ မှုခင်းကားတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေအဖို့ ရော Nam Goong Min ဖန်တွေအတွက်ရော ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…..
Live On High School Romance Drama ဖန်တွေအတွက် ကားသစ်လေး Baek Ho Rang ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ လှပချောမောတဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့် ကျောင်းမှာတင်မကဘဲ social media မှာပါ နာမည်ကြီးသူလေး ပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်းရဲ့အသည်းစွဲပေါ့ နာမည်ကြီးပေမယ့် မာနကြီးတတ်တဲ့စရိုက်ကြောင့် ဘယ်သူနဲ့မှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘဲ တသီးတခြားတည်းနေလေ့ရှိပါတယ် တစ်ရက်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး Ho Rang ကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် အကြောင်းရင်းကတော့ ထိုသူဟာ Ho Rang ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားချင်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကို သိရှိနေတဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါပဲ ထိုသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျောင်းက broadcasting club ရဲ့ခေါင်းဆောင် Go Eun Taekဆီကအကူအညီတောင်းဖို့လုပ်ရာက သူငယ်ချင်းတွေရလာခဲ့ပါတော့တယ် ဒီသူငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့သူကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါ့မလား…..အဲ့ဒီလူကရော ဘယ်သူများ….ဘယ်လို loveline တွေပေါ်လာဦးမလဲ…. ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ အပိုင်း(၈)ပိုင်းပါဝင်ပြီး တစ်ပတ်ကိုတစ်ပိုင်းနှုန်းနဲ့ အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ….။
Never Have I Ever Never Have I Ever 2020 ======================= ဇာတ်လမ်းကို ရေးထားတဲ့ စာရေးဆရာမMindy Kalingက သူ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို ပြန်လည်ခံစားပြီး လူငယ်ဘဝရဲ့ အလွဲတွေ အချစ်ပေါ် ခံစားချက်တွေကို ပုံဖော်ထားပြီး အရှေ့တိုင်းဆန်ဆန်ဟာသတွေလဲ အတော်လေးပါပါတယ်………… အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဒေဗီ​လေးက ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ​ကျောင်းတက်​နေတဲ့ ဆယ်​ကျော်သက်အရွယ် အိန္ဒိယလူမျိုး​မ​လေး​ပေါ့ …..အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်တဲ့ ဒေဗီ မိဘ​တွေက​တော့ ထုံးစံအတိုင်း အာရှဆန်ဆန် အရှေ့တိုင်း အယူအဆ​တွေရှိကြတယ်ပေါ့နော် ဒေဗီက​တော့ အ​မေရိကန်မှာ​မွေးတဲ့သူဖြစ်လို့ သူ့မိဘ​တွေနဲ့ဆန့်ကျင့်ဖက်​ပေါ့. ဒေဗီဟာ သူ့အ​ဖေဆုံးပြီးတဲ့​နောက်ပိုင်း​ စိတ်အရမ်းထိခိုက်ပြီး အောက်ပိုင်း​သေသွားခဲ့ပါတယ် . ဒါပေမယ့် ​​နွေရာသီပိတ်ရက်မှာ ကျောင်းက သူတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ရတဲ့​ ကောင်​လေး​ကြောင့် ရုတ်တရက်လမ်းပြန်​လျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်…. သူ့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ​ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကျရင် ရည်းစားရ​အောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူ သူ့သူငယ်ချင်းင​ပေါမနှစ်​ယောက်နဲ့ သူတို့​ကျောင်းမှာ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်​အောင်​နေမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်း တလွဲတွေဖြစ်လာတာကို ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ လူငယ်တွေအကြိုက် ဟာသစီးရီးတွဲလေးပေါ့ ဒေဗီရဲ့အ​မေ့စတိုင်က မြန်မာနိုင်ငံက မိဘ​တွေ​တော်​တော်များများနဲ့ဆင်နေတော့ ဒီစီးရီးတစ်ခုလုံး ခွီနေရမှာ အသေချာပါပဲ………………..
TMDb: 8.1/10 602 votes
Legend of Fei Legend of Fei ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ The Untamed ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ လန်ဝမ့်ကျီဇာတ်ကောင်နဲ့ တရှိန်ထိုးလူကြိုက်များလာပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းစွဲဖြစ်လာခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေးဝမ်ရိပေါ်(ချစ်စနိုးနဲ့ Yiboလို့ခေါ်ကြ)နဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ရှောင်ကူဇာတ်ကောင်နဲ့ လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးYingလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ကျောက်လိရင် တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်.. ဝမ်ရိပေါ်နဲ့ Ying တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားလို့ ဇာတ်လမ်းတွဲမပြသခင်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ စောင့်မျှော်ခြင်းခံနေရတာပါ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို Tencent Video နဲ့ WeTvမှာ ဒီဇင်ဘာ၁၆ရက်နေ့မှ စတင်ပြသခဲ့ပြီး လက်ရှိပြသထားတဲ့အပိုင်းထိ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးရထားပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ Preist ဝတ္ထုကို ပြန်ပြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ကျိုးဖေရဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာပြီး ဓားသိုင်းနဲ့နာမည်ကျော်သူရဲကောင်းဖြစ်လာတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် ကျိုးဖေနဲ့ ရှဲ့ယွင်တို့ရဲ့ အချစ်တွေကို အသည်းယားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက သိုင်းလောကရှုပ်ထွေးချိန် သူရဲကောင်း တောင်ဓားလီဝေးဟာ မင်းကြီးရဲ့အမိန့်အရ ဓားပြတွေကိုဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ တောင်စခန်း၄၈ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ် နောက်ပိုင်း လီဝေးဆုံးပါးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကျော်မှုတွေလျော့ပါးလာခဲ့တယ် လီဝေးရဲ့သမီးက ခေါင်းဆောင်နေရာကိုဆက်ခံခဲ့ပြီး ကျိုးရီထန်နဲ့လက်ဆက်ခဲ့ပြီး သမီးလေး ကျိုးဖေကို မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ် ကျိုးဖေ၁၃နှစ်အရွယ်မှာ ရှီးမော့မြစ်ကို မတော်တဆဖြတ်ကူးမိချိန် အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ရှဲ့ယွင်ရဲ့ကယ်တင်ပေးမှုကြောင့် ဖူးစာရေစက်စတင်ခဲ့ပါတယ်…၃နှစ်အကြာမှာ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတို့ဟာ ဟော့ကျားပေါင်မှာပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး သိုင်းလောကမှာ နှစ်အတော်ကြာ ဇာတ်မြှုပ်နေတဲ့ သိုင်းပညာရှင်တွေကို သတိထားမိစေခဲ့ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လူဆိုးချောင်လက်အောက်က ပေတုံသိုင်းသမား ၇ယောက်ရဲ့ လိုက်လံသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပြီး သိုဝှက်နက်ရှိုင်းလှတဲ့ လှည့်ကွက်ထဲရောက်သွားပါတော့တယ်…. ကျိုးဖေဟာနောက်ပိုင်းမှာ ဖော့ရွှယ်ဓား သိုင်းကွက်နဲ့သိုင်းလောကမှာနာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်…
The Penthouse ဒီ Series ဟာဆိုရင် ချစ်လိုက် မုန်းလိုက် ဇာတ်ကားမျိုးမဟုတ်ပဲ မိသားအစုအရေး အိမ်တွင်းရေး အရှုပ်တော်ပုံတွေကို တစ်မိုထူးခြားတဲ့ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက် ဇာတ်အိမ်အဆန်းနဲ့ ခံစားကြည့်ရှု့ရမှာပါ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း ဟယ်ရာနန်းတော်လို့တင်စားလောက်တဲ့ အထပ်၁၀၀ပါသော ဇိမ်ခံမိုးမျှော်အိမ်ကြီးမှာဆိုရင် များစွာသော လျို့ဝှက်ချက်တွေ ၊ မမြင်နိုင်သော ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ် ရှင်းဆူယွန်း ဟာ ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ မွေးဖွားလာသူတစ်ယောက်ပေါ့ မိုးမျှော်အိမ်ကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဆိုးလည်း မမှားပါဘူး ချောင်းဆောဂျင်က တော့ သူ့သမီးလိုအပ်တာမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆီးပေးနေသူပါ အိုယွန်းဟီ ကတော့ ဘဝပေးအခြေပနေကြောင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲ မွေးလာပေမယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးမားတဲ့သူ… ဒီလိုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ…. ချမ်းသာမှု့ ၊ အာဏာ နဲ့ များစွာသော အရှုပ်တော်ပုံတွေ ဖြစ်တည်ရာ အထပ်၁၀၀ မိုးမျှော်တိုက်ဟယ်ရာနန်းတော်ပါ [Zawgyi] Ongoing Series အသစ္ထြက္တာေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဒီ Series ဟာဆိုရင္ ခ်စ္လိုက္ မုန္းလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ မိသားအစုအေရး အိမ္တြင္းေရး အရွဳပ္ေတာ္ပံုေတြကို တစ္မိုထူးျခားတဲ့ ရိုက္ကြင္းရုိက္ကြက္ ဇာတ္အိမ္အဆန္းနဲ႔ ...
Shootout at Alair ##unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဒီဇာတ်ကားကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးမတူတဲ့ လူမျိုးစုတွေကြားပဋိပက္ခတွေကိုရိုက်ကူးတင်ပြထားတာပါ မက်ကာဘုရားကျောင်းဟာမူစလင်လူမျိုးတွေရောဟင်ဒီ လူမျိုးတွေရောလာရောက်ဆုတောင်းကန်တော့ကြတဲ့နာမည်ကြီးဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီးတော့တစ်ရက်မှာတော့ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် ခံလိုက်ရပါတယ် ထိုနေ့ကစပြီးတော့နှစ်စဉ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေ့ မှာနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပကြပါတယ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြာနှစ်ပတ်လည်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ ရဲတွေကိုလိုက်လံပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ် တရားခံအက်ခ်တာကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရင်းသေဆုံးသွားပြီလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် နှစ်တိုင်းရဲတွေကိုသတ်ဖြတ်မှုကတော့ မရပ်တန့်သွားပါဘူး ဒီလိုနဲ့ ၁၂ နှစ်တောင်ကြာသွားခဲ့ပြီးမှာ ပြည်သူတွေကရဲတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ် လူသတ်သမားအက်ခ်တာဟာမသေဘဲရဲတွေလက် ကနေလွတ်မြောက်နေတာလား သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံတွေကပဲ ဆက်ပြီးကြံစည်နေကြတာလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ဘာသာေရးမတူတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြၾကားပဋိပကၡေတြကို႐ိုက္ကူးတင္ျပထားတာပါ မက္ကာဘုရားေက်ာင္းဟာမူစလင္လူမ်ိဳးေတြေရာဟင္ဒီ လူမ်ိဳးေတြေရာလာေရာက္ဆုေတာင္းကန္ေတာ့ၾကတဲ့နာမည္ႀကီးဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့တစ္ရက္မွာေတာ့ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ ခံလိုက္ရပါတယ္ ထိုေန႔ကစၿပီးေတာ့ႏွစ္စဥ္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တဲ့ေန႔ မွာႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားက်င္းပၾကပါတယ္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ၾကာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲလုပ္တဲ့ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ရဲေတြကိုလိုက္လံပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈစတင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္ တရားခံအက္ခ္တာကိုလိုက္လံဖမ္းဆီးရင္းေသဆုံးသြားၿပီလို႔ ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္တိုင္းရဲေတြကိုသတ္ျဖတ္မႈကေတာ့ မရပ္တန္႔သြားပါဘူး ဒီလိုနဲ႔ ၁၂ ႏွစ္ေတာင္ၾကာသြားခဲ့ၿပီးမွာ ျပည္သူေတြကရဲေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါတယ္ လူသတ္သမားအက္ခ္တာဟာမေသဘဲရဲေတြလက္ ကေနလြတ္ေျမာက္ေနတာလား သူ႔ရဲ႕လက္ေအာက္ခံေတြကပဲ ဆက္ၿပီးႀကံစည္ေနၾကတာလားဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ၾကည့္ရႈရမွာပါ Review – Phyu Sin File Size – 550MB around (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL Genre : Action,Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin,Hmue Encoded by Arrow ===================================================== Episode 1 (550MB) Mediafire ၊ Alphadrive Episode2(550MB) Mediafire ၊ Alphadrive Episode3(550MB) Mediafire ၊ Alphadrive Episode4(550MB) Mediafire ၊ Alphadrive Episode ...
Kairos Kairos (2020)အညွှန်း ******************** အပိုင်းသစ် (၁ မှ ၁၆)ထိ စ/ဆုံး Seo Jin ဆိုတဲ့သူဟာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် …ဇနီးချောလေးလည်းရှိသလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်…သိပ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာမိသားစုလေးပေါ့… တစ်နေ့သူတို့မိသားစုထံကံကြမ္မာဆိုးရောက်လာတယ်..ဒီတစ်ဉီးထဲသောသမီးလေးကို ပြန်ပေးဆွဲသွားကြတယ်…မိဘ(၂)ဉီးဟာရဲကိုတိုင်ပြီး ရေကုန်ရေခန်းရှာဖွေကြတယ်…. ပြန်ပေးဆွဲတဲ့သူတွေဟာမည်သူမည်ဝါမှန်းမသိပေမဲ့ သမီးလေးရဲ့ လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီး အိမ်ကိုပို့လိုက်တယ်…သမီးလေးသေဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးမို့ ဇနီးဖြစ်သူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံသွားတယ်… ဒီလက်ညှိုးဟာ သမီးလေးလက်ညှိုးစစ်မှန်ပေမဲ့ ထူးဆန်းစွာပဲ တစ်ယောက်ထဲ ဘာအထိအခိုက်မရှိဘဲ ပြုံးရွှင်လျှောက်သွားနေတာကို အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကတွေ့မိတယ်….ဆန်းကြယ်မှုတွေဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖခင်ဖြစ်သူဆီကို အမည်မသိနောက်ဖုန်းတစ်လုံးကလည်း ထူးဆန်းစွာပဲခေါ်ဆိုလာတယ်…ဒီစီးရီးက ချစ်ကြိုက်မုန်းဟန်တော့မဟုတ်ဘူး….အက်ရှင် မှုခင်းဘက်ကို ဉီးစားပေးထားပုံပဲ…ပြီးတော့ ကွယ်ဝှက်ထားတာတွေများသလို စစချင်းပဲ အဓိကမင်းသားဖြစ်သူရဲ့ ဆောက်တည်ရာမဲ့နေတဲ့ပုံနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အရှိန်တင်ထားတယ်…ဘာတွေဆက်ြဖစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး.. မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုတော့ အတော်များများရင်းနှီးကြမှာပါ… စိတ်ဝင်စားဖို့အတော်ကောင်းနိုင်မဲ့စီးရီးမို့ ဆက်စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့….
Valley of Tears အောက်တိုဘာလ ၁၉၇၃မှာ၊အစ်စရေးနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်နဲ့ဆီးရီးယား ၂နိုင်ငံပူးပေါင်းကာ Yom Kippur(ဂျူးဥပုဒ်နေ့) မှာ အစ်စရေးကိုအလစ်ဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့် Yom Kippur စစ်ပွဲလို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာနေရာမတူကြတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ရှုထောင့်တွေကိုခွဲပြထားပြီးနောက်ပိုင်းမှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးဆုံလာကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဗီနွမ်ဆိုတဲ့ကင်းစခန်းတစ်ခုကထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတပ်သားဟာ စစ်ဖြစ်တော့မယ့်လက္ခဏာတွေကိုဖုန်းလိုင်းတွေကိုနားထောင်ရင်းသိနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ပြောစကားကိုအထက်လူကြီးတွေကအယုံအကြည်မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ စစ်သားတွေအိမ်ကိုကိုယ်စီပြန်ကြတဲ့စစ်အင်အားအနည်းဆုံးဥပုဒ်​နေ့အားလပ်ရက်မှာ အဗီနွမ်ရဲ့မှန်းဆမှုအတိုင်း ဆီးရီးယားတပ်တွေဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မီလာခီဆိုတဲ့တင့်ကားမောင်းတပ်သားဟာ မြို့ထဲမှာဆန္ဒပြရင်းအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ဖြစ်တာကိုသိတဲ့အချိန်မှာထောင်ကထွက်ပြေးပြီး သူ့ရဲ့တင့်ကားအဖွဲ့ဆီသွားပါတော့တယ်။ နာမည်ကြီးစာရေးဆရာမန်နီဘန်ဒေါ်ဟာ ဇနီးသည်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့် စစ်တပ်ထဲဝင်သွားတဲ့သားဖြစ်သူကိုလိုက်ရှာပါတယ်။ အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာ စစ်ပွဲကြားကအဖြစ်အပျက်တွေ​​ကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့မိကြရင်း အခက်အခဲတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကရုန်းကန်ကြရပုံကို စွန့်စားခန်းပုံစံရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်စစ်ကားနှစ်သက်သူတွေ၊ သဘာဝကျကျဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းနှစ်သက်သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
The Spies Who Loved Me အပိုင်းသစ် (၁ မှ ၁၆ ထိ) စ/ဆုံး Kang Ah Reum ဟာ မင်္ဂဝတ်စုံဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ပါ… သူမဟာ ယောင်္ကျားနဲ့ကွဲဖူးထားတဲ့သူပါ…ကွဲကွာပြီးလို့ နောက်အချစ်သစ်တောင် ထူထောင်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ပြင်နေတဲ့သူပေါ့….တကယ်တော့ သူမဟာ ယောင်္ကျားနဲ့ကွဲသာထားတယ် … အဲ့ဒီသူရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့ပါဘူး…တကယ်တော့ ယောင်္ကျားဟောင်းဟာ စပိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလားမသိပေမယ့် နောက်လက်ထပ်မဲ့ သူဟာလည်းစပိုင်တစ်ယောက်ပါ….သူမခဗျာ ရိုးလွန်းလို့ပဲလားမသိ တကယ့်ဆရာကျတဲ့ စပိုင်တွေနဲ့ချည်းဆုံနေရတယ်… ဒီစပိုင် ၂ ယောက်ဟာ ဘယ်လိုစပိုင်မျိုးလဲ…. တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာ နှလုံးသားကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ သူမကို လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာ အသုံးချဖို့အတွက်ပဲလား… တခြားဘာအကြောင်းအရာတွေများရှိမလဲ.. နှစ်ရှည်လများ ဆိုးလ်မြို့မှာ လှုပ်ရှားအသွင်ယူရင်း စပိုင်လုပ်နေတာ ဘာအကြောင်းတွေများဖြစ်မလဲ.
Alice in Borderland Season 1 The Queen’s Gambit နောက်ပိုင်းထွက်သမျှ Netflix original show တွေထဲမှာ Alice in Borderland ကအားရစရာအကောင်းဆုံးပဲ။ Spoiler free review မို့စိတ်ချလက်ချဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Alice in Borderland ဂျပန်ရုပ်ပြဝတ္ထုကိုအခြေခံထားပြီး ဂျပန်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပဲရိုက်ကူးထားတာပါ။ Death Note လိုအနောက်တိုင်းသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပြန်မရိုက်တာတော်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Tokyo မှာနေတဲ့ Arisu ဟာဘဝမှာရည်မှန်းချက်တစုံတရာမရှိဘဲ ဂိမ်းတွေဆော့ရင်းအချိန်ဖြုန်းနေသူပါ။ တနေ့မှာသူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လမ်းပေါ်မှာဗရုတ်ကျကြလို့ ရဲတွေရောက်လာတော့ အများသုံးအိမ်သာထဲ ဝင်ပုန်းနေရင်းတခြား dimension တခုကိုရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာကသူတို့နေခဲ့တဲ့ Tokyo နဲ့တထေရာတည်းတူပေမယ့် လူသူကင်းမဲ့ပြီးခြောက်ကပ်နေတယ်။ ဖုန်းအပါအဝင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူး။ သူတို့အသိမိတ်ဆွေတွေကိုလိုက်ရှာပေမယ့် ရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အခြေအနေကို အဖြေရှာနေတုန်းမှာပဲညရောက်လာတော့ တစုံတယောက်က LED ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေကနေတဆင့် ကစားပွဲတခုမှာပါဝင်ဖို့ညွှန်ကြားတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ သူတို့လည်းဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလျှောက်သွားတော့ အဆောက်အအုံတခုကိုရောက်သွားပြီး သူတို့လိုပဲဂိမ်းကစားဖို့ညွှန်ကြားလို့ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီး ၂ယောက်နဲ့ဆုံပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက Shibuki ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူတို့အနေနဲ့အမည်မသိအသံရှင်ပြောတဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းဂိမ်းကစားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ game arena ထဲဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လို့မရအောင်လေဆာရောင်ခြည်တွေနဲ့ပိတ်ထားကြောင်းရှင်းပြတယ်။ သူတို့ပထမဆုံးကစားရတဲ့ဂိမ်းရဲ့ difficulty ကို Three of Clubs ...
TMDb: 8.6/10 16 votes
Sweet Home (2020) ##unicode Sweet Home ဇာတ်ကားမှာတော့Cha HyunSuဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ မိဘတွေမတော်မဆမှုဖြစ်ကာသေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့် Green Houseဆိုတဲ့အိမ်ရာမှာနေထိုင်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘဝကိုရည်မှန်းချက်မရှိ အထီးကျန်ကျန်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ HyunSuက ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူပါ။ သူရဲ့ သတ်သေမှုမစတင်ခင်မှာဘဲ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ လူတွေကမွန်းစတားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကာလူသားတွေကို တိုက်ခိုက်လာပါတော့တယ်။ Green Houseအိမ်ရာမှာ နေထိုင်သူတွေက အိမ်ရာကို ပိတ်ချကာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စီ ရုန်းကန်ကြိုးစားရပါပြီး Cha HyunSuတစ်ယောက်ကတော့ မွန်းစတားတွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာမျိုးတွေခံစားနေရတာကို သတိထားမိပါတော့တယ်။ Cha HyunSuတစ်ယောက် မွန်းစတားအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမလား အိမ်ရာကလူတွေလဲ မွန်းစတားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးအသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး ##zawgyi Sweet Home ဇာတ္ကားမွာေတာ့Cha HyunSuဆိုတဲ့ လူငယ္ေလးဟာ မိဘေတြမေတာ္မဆမႈျဖစ္ကာေသဆုံးသြားခဲ့တာေၾကာင့္ Green Houseဆိုတဲ့အိမ္ရာမွာေနထိုင္ဖို႔ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘဝကိုရည္မွန္းခ်က္မရွိ အထီးက်န္က်န္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ HyunSuက ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသဖို႔ဆုံးျဖတ္ထားသူပါ။ သူရဲ႕ သတ္ေသမႈမစတင္ခင္မွာဘဲ ကမာၻႀကီးမွာ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လာၿပီးေတာ့ လူေတြကမြန္းစတားေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားကာလူသားေတြကို တိုက္ခိုက္လာပါေတာ့တယ္။ Green Houseအိမ္ရာမွာ ေနထိုင္သူေတြက အိမ္ရာကို ပိတ္ခ်ကာ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ကိုယ္စီ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားရပါျပီး Cha HyunSuတစ္ေယာက္ကေတာ့ မြန္းစတားေတြျဖစ္လာတဲ့လူေတြရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာမ်ိဳးေတြခံစားေနရတာကို သတိထားမိပါ​ေတာ့တယ္။ Cha HyunSuတစ္ေယာက္ မြန္းစတားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားမလား အိမ္ရာကလူေတြလဲ ...